हिलारी रोधाम क्लिन्टनः बहुप्रतिभाशाली महिला – Ketaketi Online
हिलारी रोधाम क्लिन्टनः बहुप्रतिभाशाली महिला
Highlights जीवनी साहित्य
June 5, 2022 June 5, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on हिलारी रोधाम क्लिन्टनः बहुप्रतिभाशाली महिला
प्रस्तुति : प्रा.डा. अच्युतमणि आचार्य
हिलारी रोधाम क्लिन्टनको नाम तपाईँहरू धेरैले सुन्नुभएको होला । तर, उनको बाल्यकाल र स्वभावबारे हामी सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । उनी को हुन् ? उनको बाल्यकाल कस्तो थियो ? उनको रुचिको विषय के थियो ? लगायतका कुराको आज हामी चर्चा गरौँ ।
हिलारी सन् १९४७ अक्टोबर २६ का दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागोस्थित एलिनोयको एउटा अस्पतालमा जन्मिएकी हुन् । उनी आमा डोरोथी र बाबु हग ई. रोधामको प्रथम सन्तान हुन् । उनलाई आफ्ना बाबुआमाले एलिनोयको आफ्नो घरमा पालनपोषण गरे । उनको घरमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो । उनका बाबुआमाले आफ्नो परिवारिक सन्तुष्टिलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्ने गर्दथे । हिलारीपछिका दुईजना भाइ पनि त्यही घरमा हुर्केका थिए । हिलारीलाई बाबुआमाले परिवारलाई सधैँ सम्मान गर्न, आफ्नो कामप्रति बफादार रहन र मानव सेवामा समर्पित रहन सानैदेखि सिकाएका थिए । उनको परिवारिक सुसंस्कारको फलस्वरुप विश्वको सबैभन्दा चर्चित महिला बन्न पुगिन् ।
आदरणीय लेखक अच्युतमणि आचार्य
उनी स्कुलमा पढ्दादेखि नै जेहेन्दार थिइन् । उनले स्कुलमा पढ्दा प्रायःजसो नेतृत्वको भूमिकामा उत्रिने गर्थिन् । स्कुलमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो विद्वता प्रस्तुत गर्थिन् । उनले गरिबहरूलाई खाद्यान्न बटुल्ने काम कयौँपल्ट गरेकी थिइन् । उनले विद्यार्थीहरूमाझ विद्यार्थीको सरकार गठन गरी आफैँ नेतृत्व गर्ने गर्थिन् । उनी सानैदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरूको सदस्यता लिँदै आएकी थिइन् । उनी राष्ट्रिय सम्मान समाज (नेशनल अनर सोसाइटी), स्थानीय मेथडिस्ट समूह तथा (अमेरिकन गल्र्स स्काउट) को पनि सदस्य थिइन् । यी सबै संस्थाका लागि हिलारीले अग्रणी भूमिका खेलेकी थिइन् ।
हिलारीले सन् १९६२ अप्रिल १५ मा प्रख्यात् नेता मार्टिन लुथर किङ्गलाई भेट्ने मौका पाएकी थिइन् । जसबाट प्रभावित भएर समाजप्रति उत्तरदायी बन्न उनले थप प्रेरणा पाएकी थिइन् ।
१७ वर्षको उमेरमै हिलारीले सन् १९६४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीका उम्मेदवार बेरी गोल्डवाल्टको लागि घरदैलो कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका खेलेकी थिइन् । उनी सन् १९६५ मा आफ्नो स्कुले शिक्षा पार गरेर कलेजस्तरको शिक्षातर्फ लागिन् । उनले मनोविज्ञान र राजनीति शास्त्र विषय लिएर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइन् । प्रथम वर्षमै उनी कलेजको रिपब्लिकन क्लबको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन् ।
हिलारीको जीवनमा अन्तरिक्षयात्री बन्ने लक्ष्य थियो । उनले नासा मा भर्ना हुन प्रयास गर्दा “महिलालाई प्रवेश छैन” भन्ने जवाफ पाएर उनी सामाजिक नेतृ हुन पुगेकी हुन् ।
सामाजिक हिंसा र अन्यायका कुराले उनलाई सानैदेखि पिरोली रहन्थ्यो । सन् १९६८ मा मार्टिन लुथर किङ्ग र बोबी केनेडीको हत्याले उनलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । आफूले समाजमा केही नगरी नहुने सोच त्यतिखेरै उनले बनाइन् । यसै सोच अनुकूल उनले समाजमा न्यायिक काम गर्न याले स्कुल अफ ल मा कानुन विषय लिएर सन् १९६९ तिर आफ्नो अध्ययन सुरू गरिन् । उनको याले स्कुल अफ ल मा अध्ययन गर्ने क्रममै बालबालिका बचाउन र परिवारलाई सम्हाल्ने रुचि बढ्यो । बालबालिका राम्रो र भित्रैदेखि परिपक्व हुनका पछाडि बाबुआमा नै महत्वपूर्ण हुन् भन्ने उनको बुझाई थियो । बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने संस्था चिल्ड्रेन्स डिफेन्स फाउन्ड मा उनले केही समय काम गरिन् । यस्तै अध्ययन गर्दै कामलाई निरन्तरता दिई रहिन् । सन् १९७३ मा हिलारीले याले स्कुल अफ ल बाट नै डाक्टरको उपाधि पाइन् । त्यसै समयमा उनले बालबालिकासम्बन्धी नै काम गर्ने संस्था याले चाइल्ड स्टडी सेन्टर मा काम गरेकी थिइन् । सन् १९७४ मा हिलारी अर्कन्सास विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । जहाँ उनले येल विश्वविद्यालयमा पढ्दाका सहपाठी विल क्लिन्टनसँग भेट्ने मौका पाइन् । उनले येलमा पढ्दा एकदिन पुस्तकालयमा पछाडि बसेर हिलारीलाई हेर्दै मुसुक्क हाँसिरहेका क्लिन्टनलाई सम्झिन् । त्यसको एक वर्ष नबित्दै विल र हिलारी विवाह बन्धनमा बाँधिए । सन् १९७८ मा उनी अर्कन्सास राज्यको राज्यपाल भएकी थिइन् । सन् १९९३ मा विल क्लिन्टन राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि उनी प्रथम महिला भइन् । यसै सालमा उनको नामबाट प्रथम पत्रिका निस्कियो । दि हिलारी क्लिन्टन क्वार्टरली भन्ने पत्रिका अमेरिकाको पहिलो महिला नामबाट प्रकाशित हुने प्रथम हो ।
हिलारी सामाजिक, न्याय र राजनीतिबाहेक लेखनमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय थिइन् । उनले सन् १९९६ जनवरी १८ का दिन आफ्नो किताब इट टेक्स अ भिलेज एण्ड अदर लेसन्स आउर चिल्ड्रेन टिच अस प्रकाशित गरिन् । राजनैतिक सक्रियताको फलस्वरुप उनी अमेरिकन सिनेटमा सन् २००० मा निर्वाचित भइन् । उनको कार्यकौशलताको परिणामस्वरुप फेरि २००७ मा दोस्रोपल्ट फेरि सिनेटर भइन् । उनले आफ्ना सबै रुचिलाई मर्न नदिई कामको निरन्तरता दिई रहिन् ।
जतिसुकै व्यस्तता भए पनि आफ्नो परिवारलाई छुट्टै समय दिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । उनी ह्वाइट हाउसमा छँदा पनि आफ्नो सामाजिक जीवनबाट अलग्गै रहन परिवारको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेकी थिइन् । उनको किताबमा बालबालिकाको लागि बाबुआमा नै सबैभन्दा उत्तरदायी हुन् भन्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । उनले भनेकी छन्, “जुन घरमा आफ्ना बालबच्चालाई समय दिन कन्जुस्याईं गरिन्छ, त्यो घरमा कहिले शान्ति छाउँदैन ।”
समाजले पनि बच्चाबच्चीलाई हुर्काउन÷बढाउन अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उनको ठम्याई थियो ।
हिलारीले बालबालिकाबाहेक अन्य विषयहरूमा पनि त्यत्तिकै आवाज उठाएकी छिन् । उनले आफू अमेरिकाको प्रथम महिला भएको बेला संसारभरिको भ्रमण गरेकी थिइन् । जसमा उनले मानवता, महिलाहिंसा लगायतका विषयमा आवाज उठाएकी थिइन् । आफू न्यायको विशेषज्ञ भएको र हरेक विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको हुनाले उनलाई संसारभरिका सबै महिला एकै हुन् भन्ने भावना उत्पन्न हुन्थ्यो । पुरुष र महिलाबीचको भेदभावको अन्त्य हुनुपर्ने उनको जोडदार माग थियो । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गर्थिन् । यस्तै गुणहरूका कारणले हिलारीलाई आफू पराजय हुँदा पनि ओबामाको सरकारमा सामेल गराइएको थियो । उनी सन् २००९ जनवरी २९ का दिन बाराक ओबामा सरकारको ६७ औँ राज्यसचिवको पदमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
यी सबै क्षमताका अतिरिक्त हिलारी क्लिन्टनले कलालाई असाध्यै माया गर्थिन् । उनलाई मूर्तिकला सबैभन्दा मनपर्ने कला हो । उनको क्लिन्टनसँगको पहिलो भेट नै येल विश्वविद्यालयको मूर्ति नै मूर्ति भएको बगैँचामा भएको थियो । यसरी नै हिलारी एलिनोर रोसमेल्टपछिको बहुचर्चित महिला नेतृ साबित भइन् । अमेरिकाको इतिहासमा त्यति नाम कमाउने महिलामा हिलारी जत्तिको सायदै होलान् । अहिले पनि आफूलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाएर जीवन प्रतिबद्धताका साथ बिताइरहेकी छिन् । छोरीको विवाहपछि उनी पतिपत्नीमात्र सँगै बस्दै आएका छन् । हिलारीबाट हामीले प्रेरणा पाउने धेरै गुणहरू छन् ।
SATHI Book Review
नेपालमा गैँडा, कहाँ कति छन् ?
गुन्जनमा ‘सम्पदा दर्शन’ माथि छलफल
March 25, 2022 March 26, 2022 Ketaketi Online
January 4, 2022 January 4, 2022 Ketaketi Online
बेइजिङमा प्रदूषण घट्यो
March 27, 2022 March 27, 2022 Ketaketi Online